Archive du 20190715
Veronique Vouland Aneini “Mitranga matetika ny valifaty politika eto”
Nanamarika ny tsingerin-taona nahazoany ny Fahaleovantena ny Frantsay, omaly alahady 14 jolay lasa teo sy niantso ny rehetra ny masoivohon` I Frantsa eto amintsika. “Manao antso avo amin`ny fanjakana mba hampihena ny kolikoly,
Fifampiraharahana momba ny “Iles Eparses” Hapetraka ny komity fakan-kevitra
Hametraka komity manokana haka ny hevitr’ireo rehetra manan-kambara momba ny nosy manodidina na “iles Eparses” ny fitondram-panjakana Malagasy araka ny fanambaran’ny
Diaspora Malagasy mifidy Azo atao tsara saingy…
Fanambarana azo atao hoe manan-tantara amin’ny lafiny fifidianana mahakasika ny fametrahana ny fahafahan’ny Malagasy rehetra mifidy, indrindra ireo mila ravinahitra any ivelany (Diaspora).
Marc Ravalomanana Lehiben’ny mpanohitra sa Ben’ny tanàna ?
Tontosa ny 12-13 jolay teo teny amin’ny Magro Tanjombato ny Kongresy lehiben’ny Antoko Tiako I Madagasikara na ny TIM.
Filohan` ny Antenimieram-pirenena Manao an-kisisika ny IRD sy ny MMM
Misy anarana maromaro voatonona hiandraikitra ny toeran’ny filohan’ny Antenimierampirenena izay hivory ny talata ho avy izao hifidy indrindra io filoha io sy hametraka ny vaomieran’asa
Depiote IRD Tompon-daka amin’ny fandikàna ny “Toky” nomena
Nanao tombana sy famintinana ny fanarahana akaiky ny fanajana ny Toky Nomena nasehon` ireo ho solombavambahoaka nandritra ny fifidianana izay natao farany teo ny komity iombonanan ho an` ny Dina.
Rakotomalala Henri “Hatsaraina aloha ny CENI sy HCC vao manao fifidianana”
Raha tsy milamina ny fanoloana ny mpikambana rehetra ao amin’ny Ceni sy ny Hcc, ny ratsamangaika, ny fokontany, ny distrika, ny kaominina izay nikirakira ny fifidianana dia tsy tokony hirosoana aloha ny fifidianana Ben’ny tanàna,
Fitantanana sy fampandrosoana ny tanàna Tsy tokony ho sakana ny loko politika
Niainantsika teo amin’ny tantara amin’ny tsy fitovian’ny firehana eo amin’ny voafidy ho ben’ny Tanàna sy ny fanjakana.
Tsiry Andriamihantasoa “Mila sahy mandray andraikitra isika!”
Izaho sahy, isika sahy. Mila mandray andraikitra isika. Ireo fehezanteny ireo, hoy ny mpanao politika,
Ratianarivo Andriamanga Bruno Mbola kandida Ben’ny tanànan’Ambavahaditokana
Mbola vonona ny hilatsaka hofidiana ho Ben’ny tanànan’ny kaominina ambanivohitra Ambavahaditokana Ratianarivo Andriamanga Bruno,
Depiote Bina Andriamanjato Afaka mifaninana amin’ny depiote 10 ny depiote TIM 1
Na dia 16 mianadahy monja aza ireo depiote Tiako i Madagasikara voafidy no hiaka-dapa eny amin’ny antenimieram-pirenena eny Tsimbazaza noho ny resaka hala-bato dia nomarihin’i Bina Andriamanjato Liantsoa, depiote voafidy tao
Rajerison Veronique « Ilaina ny fisian’ny antoko mpanohitra »
Ilaina ny fisian’ny antoko mpanohitra eto amin’ny firenena hoy Rajerison Véronique, filohan’ny antoko UNRRM hahafahana mampandroso ny firenena. Raha tsy misy mantsy ny mpanohitra hoy izy dia handeha amin’izao fotsiny ny zava-drehetra tsy hisy mpitsikera.
Fifidianana sefo fokontany Tsy misy resaka hatramin’izao
Tsy mbola misy resaka hatramin’ny anio ny resaka mikasika ny fifidianana sefo fokontany.
Lalao miverin’ny samy BAREA tetsy Mahamasina Resin’ny Barea CHAN 2020 2-0 ny Barea JIOIO 2020
Tontosa omaly tolakandro tetsy amin’ny kianjan’i Mahamasina araka ny efa namaritan’ny ”Comité de Normalisation” azy ny lalao famerenana nikatrohan’ ireo Barea JIOI sy ny Barea Chan.
Rallye de Mangoro andiany faha-2 Norombahin’i Tahina sy Ranto nitondra Subaru Impreza
Tontosa tany Moramanga tamin’ny 11 sy 12 ary 13 jolay lasa teo ny andiany faha-2 tamin’ny Rallye de Mangoro andiany faharoa nokarakarain’ny Tasamm « Tanjaky ny Sparo Automoto Malagasy »
Kianjaben’i Mahamasina Ho lasa lehibe indrindra aty amin’ny ranomasimbe Indianina
Nandritra ny lanonana goavana nandraisana ny Barea manoloana ny kianjaben’i Mahamasina ny sabotsy alina teo no nanambaran’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa hamboarina sy halehibeazina ny kianja monisipalin’i Mahamasina.
Tantara tsy hay kosehina !
Mipetraka tsy ho azo kosehina eo amin’i Tantaran’i Madagasikara ny momba ny Barean’i Madagasikara sy ny zava-bitany, ary ny tsio-drivotra nentiny teo amin’ny fiainam-pirenena. Sokajian’ny any ivelany ho firenena mahantra i Madagasikara, anjakan’ny kolikoly, mpitondra tia tena sy mpangoron-karena,…
Fiomanana amin’ny fidiran’ny mpianatra Iray volana monja no hananan’ny Ray aman-dReny
Amin’ny faran’ny volana Aogositra ho avy izao vao hifarana tanteraka ny taom-pianarana amin’ity taona 2019 ity izay feno 11 volana katroka.
CNaPS sy Ministeran’ny Asa tany Manakara Miezaka mametraka ny fiahiana ara-tsosialin’ny mpiasa
Laharam-pahamehana ny fanomezana asa mendrika ho an’ny mpiasa Malagasy manerana ny Nosy.
La Réunion kely Olona iray matin’ny hatsiaka
Efa tafiditra tanteraka ao anatin’ny vanim-potoanan’ny ririnina isika ankehitriny. Mamirifiry aoka izany ny hatsiaka, indrindra fa ny amin’ny alina. Ramatoa lehibe iray no namoy ny ainy vokatr’izany tetsy La Réunion kely.
Gripa sy kohaka Fihinanana voankazo sy legioma no fanafodiny
Mahazo vahana indray ny gripa sy ny kohoka tato ho ato. Raha araka ny fanadihadiana natao tamina dokotera tsy miankina iray dia miseho amin’ny endrika toy ny tazo izy io ka manakotsako ny vanin-taona, marary be ny loha, mikohoka ary mety handoha mihitsy.
Faritra Malalaka Ifanakalozana Mila miomana tsara i Madagasikara
Amin’ny 1 jolay 2020 no hampiharina ny Faritra Malalaka Ifanakalozana (Zone de libre échange continentale) na ZLEC.
Fitsenana an’ny BAREA Efa hita avokoa ireo zaza very ny sabotsy teo
Maro ireo nitaraina very zaza nandritra ny fitsenana ny ekipam-pirenena Barea , ny sabotsy hariva teo, indrindra ny teto Antananarivo Renivohitra. Nisy nampiely izany tamin’ny tambazotram- piarahamonina. Rehefa nanontaniana ny mpitandro filaminana dia tsy nanda ny fanjavonan’ny ankizy
Arivonimamo Voasoroky ny mpitandro filaminana ny fitsaram-bahoaka
Nitrangana lozam-piarakodia nandratrana olona teo Arivonimamo ny 11 jolay, maraina teo. Voasoroky ny mpitandro filaminana ny saika fitsaram-bahoaka.
Lozam-pifamoivoizana RN1 Fiara tapaka hisatra nandratra ny mpamily sy ny kisoa nentiny
Nitrangana lozam-pifamoivoizana, ny 10 jolay 2019 sahabo tamin’ny 7 ora hariva, ny fiara mpitatitra biby fiompy iray avy any amin’ny Faritra Bongolava ihazo an’Antananarivo. Araka ny fampitam- baovaon’ny zandarimariam-pirenena avy ao Ankadilalana